Kuraasta Aqalka Hoose ee toddobaadkan la dooranayo oo la shaaciyey | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - Toddobaadkan ayaa wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah kuwii ugu mashquulka badnaa, marka la eego doorashada kuraasta Gollaha Shacabka ee la qabanayo, kuwaasoo kor u dhaafaya 20 Kursi.
Guddiga hirgalinta doorashooyinka Gobolada Waqooyi, ayaa xaqiijiyey in 24-ka bishan Janaayo, ay qabanayaan doorashada, 12 |Kursi oo ka mid ah Aqalka Hoose ee Soomaaliya.
Guddiga ayaa xusay in kahor waqtigaas, ay ka shaqeynayaan waxyaabihii fududeynayey in ay doorashadu qabsoonto, sida in la diiwaan galiyo ergada codeyneysa, isla markaana tababaro la siiyo.
Kuraasta ay Isniinta inagu soo wajahan, ay doorashadoodu Muqdisho ka dhaceyso ee la shaaciyey, qaarkood ayey sumadoodu kala tahay: Hop-260, Hop-257, Hop-215, Hop-267, Hop-268, iyo Hop-269.
Kuraasta Gobollada Waqooyi, ee ay doorashoodu dhaceyso 24-ka bishan, ayaa la sheegayaa, in badankood ay ku soo baxayaan xildhibaannadii hore ugu fadhiyey, iyadoo laga tusaalle qaadanayo, hannaanka ay u dhacday doorashadooda, oo ah mid qofka dooran uu ku lammaan yahay, mid malxiis u ah.
Guddiga doorashada Maamulka Galmudug, ayaa isna shaaciyey, in toddobaadkan ay dhaceyso doorashada, 7-Kursi oo ka mid ah, kuwa Aqalka Joose uu ku leeyahay maamulkaas.
Kuraasta doorashadooda Galmudug ka qabsoomeyso toddobaadkan, ayaa laga xusi karaa, Hop-071 oo uu ku fadhiyo Cabdisaabir Nuur Shuuriye, oo ah wasiirka dekadaha Galmudug, iyo midka sumadiisu tahay Hop-061, oo uu dhowrkii sano ee ugu danbeysay ku fadhiyey Cabdiweli Maxamed Qanyare.
Waxaa sidoo kale la filayaa, in deggaanada Maamullada Puntland iyo Jubaland toddobaadkan lagu doorto Kuraas ka tirsan Gollaha Shacabka.
Doorashada Gollaha Shacabka ayaa ku billaabatay boobsiis ay ku lammaan tahay boob, waana tallaabo horseedi karta in ay soo laabato tabashadii jirtay, taas oo shaki galineysa in doorashada ay waqtigeeda ku soo idlaato.
Qubaraa ku taqasusay hanaanka sharciga ayaa Keydmedia Online u sheegay in wali ay waxba iska bedelin boobkii doorashadda, iyadoo heshiiskii lagu galay 9-kii bishan Muqdisho dhigayo in habraaca iyo nidaamka noqdaan kuwa hufan.